China ZAZE Petro-Chemical Process Pump-1 mveliso kunye nabenzi | Ikhonkco
Ngokuhambelana noyilo kunye nokuvelisa umgangatho we-API61011th Centrifugal Pump yePetroleum, iPetrochemical kunye neCandelo leGesi yeNdalo, siphuhlisa iipompo zenkqubo yemichiza ye-ZA / ZE.
Eyona mpompo iphambili, ngohlobo lwenkxaso, yahlulwe yangamacandelo amabini: i-OH1 kunye ne-OH2, kwaye i-impeller zizakhiwo ezivulekileyo nezivaliweyo.
Apho, i-ZA eye-OH1, ivaliwe; kunye neZAO ye-OH1, evulekileyo;
I-ZE ye-OH2, ivaliwe, kwaye i-ZE0 ye-OH2, evulekileyo.
Impompo ye-ZE, ngokwenqanaba loxinzelelo, ikwahlulahlulwe ngokwamacandelo amathathu: D, Z no-G (D ngokubanzi ayibhalwanga) ngeemeko zokusebenza.
Ibona usetyenziso olubanzi kwiimeko zokuhamba koxinzelelo oluphezulu noluphakathi lucocekile okanye lucolekile, lubola kwaye lunxibe izinto zeshishini ezinjengokucocwa kweoyile, ishishini leekhemikhali zamalahle, ishishini le-petrochemical, ubunjineli bemichiza yetyuwa, ukhuselo lokusingqongileyo, iphepha lempompo kunye nokwenza iphepha, ukususwa kwetyuwa emanzini, ukunyanga amanzi, kunye nokunyibilikisa isinyithi, ngakumbi ukuhambisa okunzima ngakumbi koxinzelelo oluphezulu, ukutyhefa, ukutsha, ukudubula, kunye nezinto ezomeleleyo ezonakalisayo kumacandelo afana nezixhobo ze-olefin, inwebu ye-ionic yesoda, imveliso yetyuwa, isichumisi, isixhobo esibuyisela umva osmosis , ukususwa kwetyuwa emanzini olwandle, i-MVR kunye nokukhuselwa kwendalo, njl.
Ukuhamba: Q = 5 ～ 2500m3 / h iNtloko: H ≤ 300m
Umz.: ZEO 100-400
ZEO ---- ZE Pump ikhowudi uthotho
O Ukuvula okungafunekiyo
100 -------- Ubungakanani bepla: 100 mm
I-400 -------- ubukhulu be-impeller: 400 mm
1.Ukuqina kunye namandla kuphuculwe ngokubonakalayo kuyilo lwe-shafting. Oku kuphawuleka ngakumbi kuphucula ukuthembeka kwempompo, kungathembisi nakubomi benkonzo ende kunye nokwehlisa iindleko zokusebenza.
2. Umzimba wokuzala uyilelwe ukuba ube zizakhiwo ezibini zokupholisa ngokwendalo kunye nokupholisa amanzi. Kwimeko yokuphakathi okungaphezulu kwe-105 ℃, icebisa ukuba ixhotyiswe ngenkqubo yokupholisa amanzi, ethoba ubushushu bokuthwala ngokupholisa ioyile yokuthambisa kwindawo efanelekileyo yokusebenza;
3. Isigqubuthelo sempompo sixhotyiswe ngesisu sokupholisa, esithoba iqondo lobushushu lokutywina umatshini ngokupholisa isithuba sobomi benkonzo ende.
4. I-pump impeller nut itshixiwe kukwaziswa kwe-washer ene-patent yaseJamani enelungelo elilodwa lomenzi. Ndiyabulela kwi-washer, amantongomane akhululekile ekukhululweni kwimeko yokujikeleza kwempompo okanye ukutshintsha. Oko kuthetha ukuba impompo ifuna ukusebenza kancinci kunye neemeko zokufaka.
5. Ezi mpompo zilandelelana ngokuhamba-hamba zinemizimba enezindlu ezibini, eziyilelwe ukulungelelanisa amandla ombane asebenza phantsi kweemeko zokusebenza ezingayiyelwanga. Ukongeza, ifuna amandla alinganayo axial esebenzisa amakhonkco okutywina kunye nemingxunya yokulinganisa.
6. Ezo ndlela zokutywinwa koomatshini njengesihlanganisi, isigxina esinye okanye isiginali-mbini, kunye neenkqubo zokutywina ezincedisayo zinokusetyenziswa ngokwendlela ezothuthwayo, ukuze ukutywina nokupholisa kuthembeke. Ukutywina kunye nokuhlamba kuya kwenziwa ngokwe-API682. Impompo shaft ukutywina ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zabasebenzisi ezithile.
7. Ishafti ibonelelwa ngamanyathelo espanner, athintela ukutyibilika xa ujongana nezixhobo, ukwenzela ukusebenza ngokukuko ekufakweni nasekudilizeni.
8. Ngokudibanisa uvalo okwandisiweyo, impompo ayifuni kuchithwa kombhobho kunye nesekethe yokulungisa nokulungisa umatshini wonke.
Egqithileyo I-ZAO Impompo yokuQiniswa kweParticle
Okulandelayo: Impompo yeZirconium
Uhlobo lwe-SRBA (SRB) lokucoca ulwelo
Spring ulayishe uhlobo ilifti ephantsi nokhuseleko lever v ...
Uhlobo lokucoca ulwelo
Uhlobo oluzele-ngokupheleleyo-ngentambo ngokhuseleko lwe-lever ...
I-9110 yokudibanisa iValve yomoya yoGutyulo